Egaan jalabultii bara dhumaatti, yommuu dhufaatiin Kiristoos dhiyaatu, wantoota raawwataman keessaa raajotni sobdootaa baay’inaan uummata keessatti faca’uusaaniiti; maqaa Kiristoos waamudhaan uummata hedduus daandii ishee dhugaarraa baasusaaniiti. Kunis kan ta’u barumsa dhugaa hin taane, barumsa dogongoraa kan ta’e garuu isa dhugaa fakkeessanii barsiisuudha. Kunimmoo kan ta'u Kitaabni Qulqulluun Masiih (barsiisaa) sobaa jedhee kan dubbateefiif sanaaf haala mijeessuufi.
Kanaaf, yeroo ammaa kanatti obboloonni keenyi barumsa sobaan liqinfamanii dhugumatti Ilma Waaqayyo Isa dhugaa Kiristoositti kan amanan itti fakkaatee kan dogongora keessa jiraatan hedduudha. Asittis gamasittis, kaleessas har’as, boris maqaa Kiristoos Iyyasuusitti maxxanuudhaan “Kiristoos nu bira jira” kan jedhan ka’aniiru; fuuldurattis ni ka’u. Ilmi Waaqayyoo Kiristoos Inni dhugaan garuu, “Sobdoonni Kiristoosonnii fi raajotni ni dhufu (ni ka’u); hanga danda’anittis warra filataman hanga dogongorsanitti mallattoofi raajii addaddaa ni agarsiisu....Egaa, gammoojjii keessa jira yoo isiniin jedhan hin bahiinaa; tulluurra jira yoo isiniin jedhanis hin amaniinaa” Mat.24:24-26.